6 Faa'iidooyinka Caafimaadka ee Kordhinta Resveratrol （Aad u dhameystiran）
Bogga ugu weyn > Resveratrol Supplemental
6-da Faa'iidadood ee Caafimaadka ee Kaabista Resveratrol
Haddii aad raadineyso meel aad ka iibsato Budada Resveratrol Jumlad ahaan, shirkadda kaliya ee aad si indho la’aan ah ugu kalsoonaan karto soo saarista alaabta ceeriin waa Cofttek. Shirkadda, iyada oo ay ugu wacan tahay kooxdeeda cilmi-baarista ee xoogga badan iyo waaxda iibka ee heeganka ah, waxay aasaaseen joogitaan adduunka oo dhan ah waqti kooban - waxay leeyihiin macaamiil iyo la-hawlgalayaal adduunka oo dhan. Resveratrol-ka ay soo saartay shirkaddu wuxuu ku yimaadaa qaybo badan oo 25 kgs ah waxaana laga soo saaray waxyaabo tayo sare leh, taas oo markaa la hubinayo in waxyaabaha ka soo baxa ee la soo saaray lagu kalsoonaan karo tayo iyo waxtar. Haddii aad rabto inaad iibsato resveratrol tiro ahaan, meesha kaliya ee laga dukaamaysto waa cofttek.com.
Resveratrol (501-36-0) waa iskudhis polyphenolic ah oo laga helo dhir badan laakiin badanaa ku dhaca canab. Resveratrol waxaa badanaa lagu magacaabaa 'stilbene' qaab dhismeedkiisa waana kan ugu caansan stilbene. Stilbenes waa xeryahooda dhirta inta badan laga helo qoyska canabka in kastoo ay ku jiri karaan qadar yar oo dhir kale ah sidoo kale. Canab gudahood, resveratrol wuxuu ku jiraa maqaarka wuxuuna u shaqeeyaa sidii phytoalexin ama sunta dhirta, kana ilaaliyo canabyada cudurada kala duwan.
Sanado badan, cilmi baarayaashu waxay ku wareereen awooda dadka Faransiiska inay cunaan cuntooyinka hodanka ku ah dufanka buuxa oo hadana aysan saameyn ku yeelan cudurada wadnaha. Dad badan ayaa u maleynaya in resveratrol ay jawaab u tahay 'Faraskan Faransiiska' ee Cudurka Wadnaha. Xaqiiqdii, khamriga cas wuxuu door yar ka ciyaaraa awood u siinta 'Faraantiga Faransiiska'. Cuntada iyo qaab nololeedka ayaa ah arrimo muhiim ah.
Wadamadaas oo doorbidista isticmaalka khamriga casaanka ah, dadka waxaa laga helaa inay cunaan ilaa 0.2 mg resveratrol maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, dalal badan oo khamriga cas aan loo doorbidin sida Isbaanishka ama Waqooyiga Ameerika, dadku waxay u muuqdaan kuwo aan lahayn resveratrol. Soo-saareyaasha, adduunka oo dhan, sidaa darteed waxay la imaanayaan waxyaalo dheeri ah oo loo yaqaan 'resveratrol supplements' kuwaasoo u ballan qaadaya dhowr faa'iidooyin caafimaad hal mar.
Su’aashu waxay tahay: waa resveratrol saameyn wax ku ool ah maadaama supplements-yadaani ay sheeganayaan inuu yahay? Aynu eegno qaar ka mid ah isticmaalka 'resveratrol'.
Maxaan Ugu Baahanahay Resveratrol?
Khamriga cas wuxuu yareeyaa kolestaroolka, xaqiiqda inteena badani waynu ka warqabnaa. Si kastaba ha noqotee, inbadan oo naga mid ah ma ogaanno inay tahay resveratrol isku-darka dhirta oo bixisa khamri kasta oo casaan ah hantidan. Khamriga cas agtiisa, resveratrol waxaa laga helaa dhowr cunno oo kale. Resveratrol (501-36-0) markii ugu horaysay waa la go'doomiyay 1939-kii iyo sannadihii la soo dhaafay, cilmi-baarista lagu sameeyay dhismahan waxaa lagu soo bandhigay faa'iidooyinkeeda caafimaad ee kala duwan, taas oo iyaduna horseeday baahida sii kordheysa ee xaruntan. Marka laga reebo yareynta kolestaroolka, resveratrol sidoo kale waxaa loo yaqaanaa inay kor u qaaddo shaqada garashada iyo nidaaminta cadaadiska dhiigga.
Maqaalkaan oo faahfaahsan oo ku saabsan resveratrol, waxaan uga wada hadalnay faa'iidooyinkiisa, isticmaalkiisa, iyo qiyaasta aaminka ah waxaan sidoo kale kugula talineynaa sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'resveratrol supplement' 2021 iyo sidoo kale halka laga iibsado xarunta warshaddan oo aad u badan. Si kastaba ha noqotee, aan ku bilowno aasaaska koowaad.
Waa maxay faa'iidooyinka resveratrol?
① Waxay Yareysaa Dhiig karka
Sannadkii 2015, daraasad ayaa shaaca ka qaadday in qadar sare oo ah 'resveratrol' ay yareyneyso cadaadiska dhiigga ee systolic oo aan u aragno inuu yahay lambarka sare ee akhriska cadaadiska dhiigga. Dhiig-karka dhiig-baxa badan ee dhiig-baxa waxaa loo tixgeliyaa inuu khatar ku yahay fayo-qabka qofka maxaa yeelay waxay kordhisaa halista cudurrada wadnaha ee qofka. Resveratrol wuxuu hoos u dhigaa cadaadiska dhiigga isagoo soo saaraya nitric oxide badan, taas oo, iyana, keenta xididdada dhiigga inay dabcaan. In kasta oo ay jirto caddeyn ku filan oo soo jeedinaysa in resveratrol uu yareeyo cadaadiska dhiigga, haddana cilmi-baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay in la sameeyo oo ku saabsan qiyaasta saxda ah. (1) Sonia L. Ramírez-Garza, Emily P. Laveriano-Santos,
Is Waa la ogyahay in kor loo qaado Caafimaadka Maskaxda
Daraasado la sameeyay sannadihii la soo dhaafay waxay muujiyeen in isticmaalka khamriga cas ee joogtada ahi uu si weyn hoos ugu dhigo hoos u dhaca ku yimaadda garashada garashada ee da'da. Tani waxay ugu horreyntii sabab u tahay resveratrol-ka ku jira khamriga cas. Resveratrol wuxuu leeyahay astaamo anti-bararka iyo anti-oxidant wuxuuna xaddidayaa shaqada beta-amyloids, kuwaas oo mas'uul ka ah bilawga Alzheimers.
Ve Resveratrol wuxuu si gaar ah waxtar ugu leeyahay dadka qaba cudurka macaanka
Sanadihii ugu dambeeyay, daraasado badan oo xayawaan ah ayaa la sameeyay si loo darso saamaynta resveratrol ee cudurka kaadi macaanka. Xayawaanka, resveratrol wuxuu kordhiyaa dareenka insulinta wuxuuna joojiyaa shaqada enzyme ee mas'uul ka ah u bedelka gulukooska loo yaqaan 'sorbitol'. Sorbitol waa sonkor u horseeda walaaca fekerka oo sababa dhibaatooyinka dadka sokorta qaba. Marka taa laga soo tago, saynisyahano waxay rumeysan yihiin in resveratrol ay shaqeyso AMPK, oo ah borotiin ka hortaga gulukoosta, taa badalkeed, yareynta heerka sonkorta ee jirka ku jirta.
May Waxay xakamayn kartaa unugyada kansarka waxayna kordhin kartaa cimriga aadanaha
Cilmi baaris ayaa muujisay in resveratrol ay horjoogsan karto koritaanka unugyada kansarka ee jirka ku jira iyadoo la beddelayo muujinta hidda-wadaha ee unugyada kansarka. Tan ka sii muhiimsan, daraasadaha xayawaanka ayaa sidoo kale muujiyey in resveratrol ay ka hortageyso faafitaanka kansarka ku tiirsan hormoonnada iyadoo la faragalinayo sida loo muujiyo hormoonnada qaarkood.
Sidoo kale, saamaynta kor u qaadida nolosha ee resveratrol waxay ahayd mowduuc laga wada sheekeysto saynisyahano. Daraasado badan oo xayawaan ah, resveratrol waxay wanaajisay nolosha xayawaan la xushay iyadoo la dhaqaajinayo hiddo-wadayaasha qaarkood ee lagu yaqaan inay la dagaallamaan kana fogaadaan cudurada la xiriira da'da. Saynisyahannadu waxay filayaan natiijooyin tan la mid ah oo ku dhaca aadanaha. Si kastaba ha noqotee, baaritaan dheeraad ah ayaa loo baahan yahay.
Is Waa dawo wax ku ool ah oo loo yaqaan 'Arthritis' iyo 'Joint xanuun'
Resveratrol waa daaweyn wax ku ool ah oo looga hortago arthritis-ka iyo xanuunka laabatada. Xaruntaan ku saleysan dhirta ayaa jirka ka difaacaysa xanuunka laabatooyinka iyo arthritis-ka iyadoo hoos u dhigeysa jiritaanka carjawda. Daraasadaha xayawaanada qaarkood waxay sidoo kale muujiyeen in resveratrol-ka uu ka ilaaliyo kala-goysyada iyadoo yareyneysa caabuqa.
⑥ Waxay bixisaa kahortag cudurrada wadnaha
Resveratrol waxay wadnaha ka difaacdaa dhowr siyaabood oo kaladuwan. Daraasadaha xayawaanku waxay muujiyeen in xaruntaani ka hortagayso cudurada wadnaha iyadoo la joojinayo shaqeynta enzyme gaar ah, oo lala xiriirinayo soosaarka kolestaroolka. Tan ka sii muhiimsan, maadaama resveratrol ay leedahay guryo ka hortag sunta dilaaga ah, waxay yareynaysaa gubashada kolestaroolka LDL, taasoo ugu horreyn mas'uul ka ah dhismayaasha huurada ee dhismaha.
Resveratrol ma u fiican yahay beerkaaga?
Waxay ka ilaalisay beerka kahortaga kiimikada, cholestatic, iyo dhaawaca khamriga. Resveratrol waxay hagaajin kartaa dheef-shiid kiimikaadka iyo astaanta dufanka waxayna yareyn kartaa fibrosis-ka beerka iyo steatosis. Intaa waxaa sii dheer, waxay awood u yeelatay inay beddesho unugyada cagaarshowga unugyada cagaarshowga.
Cunnooyinkee ayaa ku adag beerka?
6 cunnooyin oo laga fogaado haddii aad leedahay beer dufan leh
Aalkoladu waa sababta ugu weyn ee keenta cudurka beerka dufanka leh iyo sidoo kale cudurada kale ee beerka.
Sonkor lagu daray. Ka fogow cuntooyinka sonkorta leh sida nacnaca, buskudka, soodhaha, iyo cabitaanka miraha.
Cunnooyinka shiilan. Kuwani waxay ku badan yihiin dufanka iyo kalooriyada.
Rooti cad, bariis, iyo baasto.
Sideen u xoogayn karaa beerkayga?
13 Dariiqo oo loogu talagalay Beerka Caafimaadka qaba
Hayso miisaan caafimaad leh.
Cun cunto dheellitiran.
Jimicsi joogto ah.
Ka fogow sunta.
Khamriga u isticmaal si masuuliyad leh.
Ka fogow isticmaalka daroogada sharci darrada ah.
Ka fogow cirbadaha wasakhaysan.
Hel daryeel caafimaad haddii aad isku aragtid dhiig.
Ha la wadaagin waxyaabaha nadaafadda gaarka ah.
Layli galmo aamin ah.
Raac tilmaamaha ku saabsan dhammaan daawooyinka.
Resveratrol ma ufiican yahay kilyaha?
Resveratrol waxay kahortagi kartaa dhaawaca kelyaha, oo ay kujiraan sonkorowga nephropathy, dhaawaca kelyaha ee daawada keena, dhaawaca kelyaha ee aldosterone, dhaawaca ischemia-reperfusion, dhaawaca kalyaha ee sepsis, iyo kalyaha xannibaya, iyada oo loo marayo saameynteeda antioxidant iyo firfircoonida SIRT1.
Miyuu subagga loosku leeyahay resveratrol?
Subagga Lawska: Subagga looska wuxuu ku fiican yahay qurxinta tufaaxa iyo celery, laakiin sidoo kale waxaa ku jira xoogaa resveratrol ah (illaa. 13 mg koobkiiba). Subagga looska waa isha weyn ee laga helo niacin iyo manganese.
Resveratrol ma kaa caawineysaa inaad miisaankaaga dhinto?
Guud ahaan, falanqaynta maadada ee hadda socota ayaa muujisay in qaadashada resveratrol ay si weyn hoos ugu dhigtay miisaanka, BMI, WC iyo dufanka, iyo si aad ah u kordhay cufnaanta caatada, laakiin ma aysan saameyn heerarka leptin iyo adiponectin.
Muxuu Resveratrol ku sameeyaa maqaarka?
Resveratrol wuxuu si fudud u dhex geli karaa caqabadda maqaarka wuxuuna si firfircoon u gaabin karaa habka gabowga maqaarka. Resveratrol sidoo kale waxay leedahay anti-bararka, anti-microbial, iyo antioxidant, taas oo markaa maqaarkaaga ka dhigaysa mid caafimaad qaba kana madaxbanaan jabitaanka iyo caabuqa.
Khamri noocee ah ayaa leh qiyaasta ugu badan ee resveratrol?
Resveratrol wuxuu si xoogan ula xiriiraa canab cas iyo khamriga cas ee laga sameeyay canab. Khamriga sida Malbec, Petite Sirah, St. Laurent iyo Pinot Noir ayaa leh waxyaabaha ugu badan ee resveratrol ah.
Resveratrol miyuu kordhiyaa tamarta?
Resveratrol waxaa lagu sharaxay inuu yahay jilitaanka xaddidaadda kalooriga, taasoo horseed u ah waxqabadka jimicsiga iyo dareenka insulin (kordhinta kharashka tamarta), iyo sidoo kale yeelashada saameyn dufanka jirka oo hoos u dhigeysa iyadoo la joojinayo adipogenesis, iyo kordhinta abaabulka dufanka ee unugyada adipose
Resveratrol miyuu yareeyaa cadaadiska dhiigga?
Resveratrol wuxuu dhexdhexaadiyaa hoos u dhigida cadaadiska dhiigga isagoo si kadis ah u kicinaya qiiqa oksijiinta, gaar ahaan xilliyada cadaadiska oksidheer, farsamooyinka laga yaabo inay noqdaan muuqaalka guud ee maadooyinka antioxidant.
Cunto noocee ah ayaa ku badan resveratrol?
Waxaad horey u cuni kartaa qadar cadaalad ah oo ah resveratrol. Waxaa laga helaa cuntooyinka sida looska, pistachios, canab, khamri casaan iyo cadaan, buluug, cranberries, iyo xitaa kookaha iyo shukulaatada madow. Dhirta ay cuntooyinkani ka yimaadaan waxay sameeyaan resveratrol si ay ula dagaallamaan infekshinka fungal, shucaaca ultraviolet, walbahaarka, iyo dhaawaca.
Cunto noocee ah ayaa leh quercetin-ka ugu badan?
Quercetin waxay kujirtaa tiro badan oo tufaax ah, malab, raspber, basal, canab casaan, jeeriga, miraha liinta, iyo khudaarta cagaaran. Khudaarta iyo miraha, waxyaabaha ku jira quercetin ayaa ugu badan basasha. Midabka guluubka iyo nooca waxay umuuqdaan inay yihiin qodob go'aaminaya iskuxirka quercetin ee basasha.
Resveratrol miyuu kordhiyaa testosterone?
Cilmi baadhayaashu waxay ogaadeen in wadarta heerarka testosterone ay hoos u dhacday boqolkiiba 23.1 dumarka ka mid ah ee helay kaabista resveratrol. Marka la barbardhigo, heerarka testosterone waxay kordheen boqolkiiba 2.9 kooxda placebo.
Maxaa dhacaya haddii aad cuntid sabiib maalin kasta?
Cunto qaadasho caafimaad leh oo sabiib ah oo leh cunnooyinkaaga maalinlaha ah ayaa kaa badbaadin kara cilladaha birta. Cinabyadan la qalajiyey ayaa ah kuwo aad ugu hooseeya kalooriyada oo dabiici ahaan macaan. Waxay sidoo kale yihiin kuwo xajmi leh, sidaa darteed, waxay ka caawiyaan jirka inuu dareemo dhereg muddo dheer adeeg yar.
Ma qaadan kartaa resveratrol aad u badan?
Marka lagu qaato qiyaaso ilaa 1500 mg maalin kasta ilaa 3 bilood, resveratrol waa SAMAYNTA SAFE. Qiyaaso ka sareeya ilaa 2000-3000 mg maalintii ayaa si ammaan ah loo isticmaalay 2-6 bilood. Si kastaba ha noqotee, qiyaasahan sare ee resveratrol waxay u badan tahay inay sababaan dhibaatooyin caloosha.
Miyuu Resveratrol hooseeya testosterone?
Resveratrol wuxuu yareeyaa heerarka wareegayayaasha hormoonada wareega laakiin saameyn kuma laha, testosterone, dihydrotestosterone, heerarka PSA ama mugga qanjirka 'prostate'.
Resveratrol Dhab ahaantii miyuu shaqeeyaa?
Daraasadaha qaarkood waxay muujinayaan in resveratrol ay ku xirnaan karto halista hoose ee caabuqa iyo xinjirowga dhiigga, taas oo yareyn karta halista cudurka wadnaha. Laakiin daraasado kale wax faa iido ah kama helin resveratrol ka hortaga cudurka wadnaha.
Muxuu Resveratrol u sameeyaa wejigaaga?
Maadada ayaa lagu dabaqay, resveratrol wuxuu caawiyaa ilaalinta maqaarka dushiisa, kala goynta iyo caawinta diidmada saameynta xun ee deegaanka, wuxuuna iftiimiyaa midab muuqaal daallan. Waxay sidoo kale leedahay waxyaabo muhiim ah oo maqaarka dejiya oo laga yaabo inay gacan ka geysato yareynta muuqaalka casaanka
Immisa resveratrol ayaan qaadan karaa maalin kasta?
Qiyaasta resveratrol ee ku habboon waxay kuxirantahay shaqada loogu talagalay kaabista. Tusaale ahaan, kaabista socodka dhiigga maskaxda waxay ubaahantahay shaqsiyaadka inay cunaan resveratrol inta udhaxeysa 250-500 mg halka markii laguu qoro kahortaga aromatase, inta udhaxeysa waxaa badanaa lagu hayaa ilaa 500 mg maalintii.
Shakhsiyaadka caafimaadka qaba ee qaata resveratrol si loo hagaajiyo caafimaadka wadnaha ama kor loogu qaado cimri dhererkooda waxaa lagula talinayaa inay ilaashadaan qiyaastooda inta udhaxeysa 150-445 mg. Si kastaba ha noqotee, kuwa ka cabanaya cillad kasta waxaa lagula talinayaa inay xajistaan ​​qiyaasta hoose ee 5-10mg maalintii. Haddii aad ku xanuunsato xaalad kasta, hubi inaad la tashato dhakhtarkaaga kahor intaadan bilaabin wax daawo ah
Resveratrol miyuu khafiifiyaa maqaarka?
Daraasaadka xayawaanka iyo tijaabooyinka kiliinikada, 1% resveratrol ayaa la muujiyey si loo yareeyo midabaynta ay keento UV markii la mariyo maqaarka maqaar ahaan. Analog-yada 'resveratrol analogs', RTA iyo RTG, sidoo kale waxay muujiyeen saamaynta iftiinka maqaarka bina-aadamka ee tijaabooyinka bukaan socodka ee uruurinta la tijaabiyey (04% RTA, 0.8% RTA iyo 0.4% RTG).
Sidee ayaad ugu dalban kartaa resveratrol wajigaaga?
Green wuxuu dhahaa serum, codso kadib markaad nadiifiso, ama hadaad toner u isticmaasho habka daryeelka maqaarkaaga, markaa waxaad codsan laheyd talaabadaas kadib. Haddii aad isticmaaleysid resveratrol qoyaan, ka dib markaa waad codsan lahayd isla marka aad nadiifiso ka dib, waxaad laba jeer maalintii, subaxa iyo fiidkii.
Resveratrol ma ufiican yahay finanka?
Antioxidant loo yaqaan 'resveratrol' oo laga helo canab iyo khamri cas ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato nadiifinta jabinta xun, daraasad cusub oo laga helay UCLA. Markii ay cilmi baarayaashu adeegsadeen resveratrol-ka antioxidant-ka nooc ka mid ah bakteeriyada finanka keenta, waxay ogaadeen inay hor istaageyso koritaanka cayayaanka soo saara finanka muddo waqti dheer.
Resveratrol miyuu u badbaado kelyaha?
Miyuu CoQ10 dhaawacaa kilyahaaga?
Dhibaatooyinka ay keento CoQ10 waxay umuuqdaan kuwa dhif iyo naadir ah. Waxaa ka mid ah shuban, lallabbo, iyo laab xanuun. Khataraha Dadka qaba cudurada daba dheeraada sida wadnaha oo istaaga, kilyaha ama dhibaatooyinka beerka, ama sonkorowgu waa inay ka digtoonaadaan isticmaalka dheecaankan.
Cunto noocee ah ayaa ka kooban resveratrol sare?
Waxaa laga helaa cuntooyinka sida looska, pistachios, canab, khamri casaan iyo cadaan, buluug, cranberries, iyo xitaa kookaha iyo shukulaatada madow. Dhirta ay cuntooyinkani ka yimaadaan waxay sameeyaan resveratrol si ay ula dagaallamaan infekshinka fungal, shucaaca ultraviolet, walbahaarka, iyo dhaawaca.
Fiitamiino noocee ah ayaa ku adag kelyaha?
Faytamiinada ku milma dufanka (A, D, E iyo K) waxay u badan tahay inay ku ururaan jirkaaga, sidaas darteed kuwaa waa laga ilaaliyaa ilaa uu takhtarkaaga kalyaha kuu qoro mooyee. Faytamiin A gaar ahaan waa walaac, maaddaama heerarka sunta ah ay ku dhici karaan siyaado maalinle ah.
Cunto noocee ah ayaa gacan ka geysata hagaajinta kelyaha?
Kalluunka dufanka badan.
Cagaar caleen madow.
Resveratrol Ma Nabdoon tahay?
Resveratrol-ka laga qaato qiyaas ahaan 1500 mg maalin kasta afka ayaa loo tixgeliyaa inay amaan tahay. Muddada qaadashada, si kastaba ha ahaatee, waa inaysan ka badnaan 3 bilood. Qiyaasta sare ee qiyaasta 2000-3000 mg maalin kasta waa la qaadan karaa laakiin waxaa lagu yaqaan inay sababaan arrimaha caloosha.
Haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya waa inay ku qaataan kaabis badan oo xoogaa ah. Si kastaba ha noqotee, waa inay isku dayaan oo ay ka helaan qadarkooda resveratrol-ka ee laga helo ilo dabiici ah, sida maqaarka canabka iyo casiirka canabka. Khamri waa inaysan kooxdu cunin.
Dadka la ildaran xanuunnada dhiig-baxa waa inay ka fogaadaan resveratrol maaddaama ay yareynayso xinjirowga dhiigga. Sidoo kale, dadka la silcaya xaaladaha hormoonnada xasaasiga ah, sida ugxan-sidaha, makaanka, ama kansarka naasaha sidoo kale waa inay ka fogaadaan waxyaabaha loo yaqaan 'resveratrol'.
Malbec ma u fiicantahay qalbigaaga?
Canabyada 'Malbec' waxay leeyihiin qaar ka mid ah maqaarka ugu qaro weyn dhammaan noocyada canabka-canabka. Tani waxay ka dhigan tahay inay ku raran yihiin antioxidants resveratrol oo ah furayaasha caafimaadka wadnaha iyo difaaca jirka.
Resveratrol ma sababi karaa madax xanuun?
Waxaan soo bandhignay in ficil-celinta 'resveratrol' ay kordhiso waxqabadka 'vasodilator endothelial vasodilator', taasoo u horseeday kuwa kale inay soo jeediyaan in resveratrol ee khamriga cas ay sababi karto madax xanuunka dhanjafka.
Waa maxay dhibaatooyinka soo raaca ee qaadashada resveratrol?
Resveratrol uma muuqato inay leedahay waxyeellooyin qiyaaso waqti-gaaban ah (1.0 g). Haddii kale, qiyaasta 2.5 g ama ka badan maalintii, dhibaatooyinka soo raaca ayaa dhici kara, sida lallabbo, matag, shuban iyo cillad beerka ku dhacda bukaanka qaba cudurka beerka dufanka leh ee aan khamriga ahayn
Maxaa resveratrol loo isticmaalaa in lagu daaweeyo?
Caannimada sii kordheysa ee resveratrol waxaa loo aanayn karaa isticmaalka kala duwan ee badeecadan. Kaabista 'Resveratrol' waxay sare u qaaddaa luminta miisaanka ee shaqsiyaadka waaweyn waxayna sidoo kale sare u qaadeysaa maqaarka wanaagsan. Kordhinta kaydka ah ee loo yaqaan Resveratrol, markii la qaato kahor jimicsiga, ayaa sidoo kale kordhisa dheefaha la xiriira jimicsiga culus. Daraasadda ayaa sidoo kale caddeysay in Resveratrol ay hoos u dhigto gulukoosta dhiigga oo ay hagaajiso socodka dhiigga. Waxay kordhisaa dareenka insulinta, sidaa daraadeed, waxaa loo tixgeliyaa inay u fiican tahay dheeri ahaan dadka qaba cudurka macaanka. Waxay kaloo kobcisaa caafimaadka wadnaha iyadoo la yareynayo triglycerides. Ugu dambeyntiina, waxay yareysaa waxqabadka unugyada kansarka waana daaweyn wax ku ool ah oo ka dhan ah arthritis-ka raaga iyo rinjiga laabatada.
Resveratrol miyuu yareeyaa estrogen?
Resveratrol waxaa lagu muujiyey inay xakameyso faafitaanka unugyada kansarka naasaha ee ER-togan iyo kuwa taban ee nidaamka dhaqanka unugyada. Waxay u shaqeysaa sida agonist estrogen ama antagonist iyadoo kuxiran noocyada unugyada, estrogen reseptor isoform, iyo joogitaanka estrogens endogenous
Maxay yihiin calaamadaha lagu garto in wax ka qaldan yihiin kelyahaaga?
Isbeddel ku saabsan intaad kaadido.
Pee waa xumbo, dhiig leh, midab doorsoon, ama bunni ah.
Xanuun intaad kaadido.
Barar ku dhaca gacmahaaga, curcurahaaga, lugahaaga, anqawyadaada, hareeraha indhahaaga, wejigaaga, ama calooshaada.
Lugaha aan xasillooneyn inta lagu jiro hurdada.
Wadajir ama laf xanuun.
Xanuun dhabarka dambe halka kilyaha yaalliin.
Waad daashay markasta.
Miyaan ku qaadan karaa resveratrol dhibaato tayroodh?
Xogtaani waxay muujineysaa in resveratrol uu yahay kahortaga muujinta NIS iyo shaqada unugyada tayroodh ee caadiga ah. Intaas waxaa sii dheer, resveratrol waxay umuuqataa inay leedahay doorka carqaladeynta qanjirka 'thyroid', sidaas awgeed waxaan soo jeedineynaa taxaddar cunista qadar badan oo resveratrol.
Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee resveratrol?
Khamriga cas wuxuu leeyahay uruurinta ugu badan ee resveratrol ee cuntada. Tani waxay ku mahadsan tahay qadarka waqtiga hargaha canabku ku qaataan halsano si loo sameeyo khamri cas. Joogitaanka Resveratrol ee khamriga cas waa hal sabab oo laga yaabo inaad u maqashay iyadoo loo maleynayo inay tahay mid caafimaad qaba.
Tufaaxu ma leeyihiin resveratrol?
Koox cilmi-baareyaal ah oo ka tirsan Jaamacadda Washington State University ayaa shaaca ka qaaday in canab, blackberries, raspberries, strawberries iyo tufaax, oo hodan ku ah resveratrol, ay gubaan dufanka xad-dhaafka ah. Waa tan sida. Istaraatiijiyad cusub oo looga hortago loona daweeyo buurnida ayaa ku jirta antioxidant laga helo miraha badan: resveratrol.
Xagee Ka Iibsan Karaa Pvederrol Pulder?
Iyada oo dadku aad iyo aad ugu baraarugeen faa'iidooyinka resveratrol, baahida loo qabo kaabis resveratrol ayaa si aad ah ugu kordhay suuqa. Tani waxay horseeday in shirkadaha wax soosaarka ay ku tartamaan midba midka kale inuu soo saaro kaabis tayo sare leh si uu saamiga suuqa ugala wareego. Haddii aad tahay soo saaraha kaabeyaasha caafimaadka ee qorsheynaya inaad ku biirto suuqa dheellitirka 'resveratrol supplements', waa inaad hubisaa inaad heleyso budada tayada ugu sareysa ee resveratrol. Dhiirrigelinta maaddooyinka tayada wanaagsan waa tallaabada ugu horreysa ee lagu hubinayo guusha ganacsi kasta.
Haddii aad raadinayso meel aad ku iibso budada resveratrol Jumlad ahaan, shirkadda kaliya ee aad si indho la’aan ah ugu kalsoonaan karto soo saarista alaabta ceeriin waa Cofttek. Shirkadda, iyada oo ay ugu wacan tahay kooxdeeda cilmi-baarista ee xoogga badan iyo waaxda iibka ee heeganka ah, waxay aasaaseen joogitaan adduunka oo dhan ah waqti kooban - waxay leeyihiin macaamiil iyo la-hawlgalayaal adduunka oo idil. Resveratrol-ka ay soo saartay shirkaddu wuxuu ku yimaadaa dufcado waaweyn oo 25 kgs ah waxaana laga soo saaray waxyaabo tayo sare leh, taas oo lagu hubinayo in waxyaabaha ka soo baxa ee la soo saaray lagu kalsoonaan karo tayo iyo waxtar. Haddii aad rabto inaad iibsato resveratrol tiro ahaan, meesha kaliya ee wax laga iibsado waa cofttek.com.
(1) Sonia L. Ramírez-Garza, Emily P. Laveriano-Santos, María Marhuenda-Muñoz, Carolina E. Storniolo, Anna Tresserra-Rimbau, Anna Vallverdú-Queralt iyo Rosa M. Lamuela-Raventós1 (2018) Saameynta Caafimaadka ee Resveratrol: Natiijooyinka ka soo baxay tijaabooyinka Faragelinta Aadanaha, Nafaqooyinka.10 (12)
(2) Bahare Salehi, Abhay Prakash Mishra, Manisha Nigam, Bilge Sener, Mehtap Kilic, Mehdi Sharifi-Rad, Patrick Valere Tsouh Fokou, Natália Martins, iyo Javad Sharifi-Rad (2018) Resveratrol: Seefta laba af leh ee Faa'iidooyinka Caafimaadka. 6 (3).
(3) Adi Y. Berman, Rachel A. Motechin, Maia Y. Wiesenfeld & Marina K. Holz (2017) Awoodda daweynta ah ee resveratrol: dib u eegista tijaabooyinka caafimaad, npj Kontoroolka Oncology mugga 1, lambarka qodobka: 35 edn.
(5) Safarka si loo sahamiyo eg.
(6) Oleoylethanolamide (oea) - usha sixirka ee noloshaada.
(7) Anandamide vs cbd: kee baa caafimaadkaaga ugu fiican? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga!
(8) Waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan nicotinamide riboside chloride.
(9) Magnesium l-threonate supplements: faa'iidooyinka, qiyaasta, iyo waxyeelooyinka.
(10) Palmitoylethanolamide (digir): faa'iidooyinka, qiyaasta, isticmaalka, kaabista.
(11) 5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada fosfatidylserine (ps).
(12) 5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13) Kaabista nootropic ee ugu fiican alfa gpc.
(14) Kaabista da'da ee ugu wanaagsan ee nikotiinamide mononucleotide (nmn).